Nyanzvi Dzoshora Hurumende Iri Kuda Kuomesera Vashandisi veMadandemutande
Veruzhinji Vanoshandisa 'WhatssAp' Kutaurirana
Nyanzvi dzinoti hurumende inogona kuvhara madandemutande kana kushungurudza vanoashandisa sekuvimbisa kwayakaita asi izvi zvinosvibisa chimiro chenyika pamwe nekuti irasikirwe nebhizimisi rakwanda.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko nematongerwo enyika dzinoti veruzhinji vanofanira kutora mashoko ehurumende zvakadzama sezvo hurumende ichikwanisa kuita zvairi kutaura.
Mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheChristian College of Southern Africa, VaDonald Mukota, vanoti pane dzimwe nyika dzemuAfrica dzakatombovhara madandemutande kana kusunga vanoashandisa, saka zvinogona kuitika muZimbabwe.
Asi vanoti izvi handizvo zvingaite kuti vanhu vatadze kushandisa madandemutande.
Asi vanotiwo vanhu vanofanira kushandisa madandemutande mune zvakanaka.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisayi Ruhanya, vanoti hazvibatsiri kuvhara madandemutande uye kana hurumende yaita izvi, inenge yaratidza pachena kuti haidi hutongo hwejekerere.
Doctor Ruhanya vanoti zvekuvhara madandemutande zvinoitwa nehurumende dzine hudzvanyiriri uye dzine zvadzinoda kuvanza.
Vanoti zvinoda mari yakawanda chose kuvhara madandemutande uye hurumende dzisina mari dzakaita seyeZimbabwe dzinogona kunetsekana kuita izvi.
Asi vanoti Zimbabwe inogona kuwana rubatsiro rwekuita izvi kubva kunyika dzakaita seChina.
Muzvare Kholiwe Majama Nyoni vanoti zvinosuwisa kuti hurumende yeZimbabwe iri kuronga kuomesera vanhu vanoshandisa madandemutande iyo iri iyo nzira yave kushandiswa neveruzhinji kufambisa mashoko pamwe nekunzwa nhau kubva mukati nekunze kwenyika.
Muzvare Majama Nyoni, avo vachangobva kumusangano we Forum on Internet Freedom in Africa wakaitirwa kuSouth Africa svondo rapfuura, vati zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda chose kana madandemutande akavharwa kana kuvhiringwa.
Sangano reCollaboration on International ICT Policy for East and South Africa rinoti kuvharwa kwemadandemutande kwakaita kuti nyika dzeSub Saharan Africa dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora.